UbuGcisa bobuGcisa Ubugcisa
UMarko Rothko (1903-1970) wayengomnye wamalungu awaziwa kakhulu kwi- Abstract Expressionist movement, eyaziwa ngokuyinhloko kumzobo webala . Udweliso lwakhe oludumileyo olunemibala emininzi yombala, olubandakanya iibhloko ezinkulu ezijikelezayo, umbala wokutshiza, ukuxhuma, ukudibanisa kunye nokuthutha umbukeli kwelinye indawo, enye inqaku, ukukhulula umoya ukususela ekugxininiseni kwansuku zonke.
Le miboniso ihlala ikhanya ngaphakathi kwaye ibonakala iyaphila, iphefumula, inxibelelana nombukeli kwingxoxo yencoko, ukudala ingqiqo yengcwele ekusebenzisaneni, ukukhumbuza i-Ulwalamano oluchazwe ngumfundisi wenkolo oyiMartin Buber.
Ngokuphathelele ulwalamano lomsebenzi wakhe kumbukeli uRothko wathi, "Umfanekiso uhlala kunye nobudlelwane, ukwandisa nokuvuselela kwamehlo omveleli onobuchule. Kufa ngesibonakaliso esifanayo. Ngoko ke kuyingozi ukuyithumela ehlabathini. Kwangaphi na okumele kuphazamiseke ngamehlo okungaxhatshazi kunye nenkohlakalo yabantu abangenamandla. "Kwakhona wathi, 'andinomdla kubudlelwane phakathi kohlobo nombala. Into endiyinyamekelayo yintetho yeemvakalelo ezisisiseko zomntu: intlekele, ukuhlaziya, i-destiny.
URothko wazalelwa uMarcus Rothkowitz ngoSeptemba 25, 1903 eDvinsk, eRashiya. Wafika eUnited States ngo-1913 kunye nentsapho yakhe, ehlala ePortland, e-Oregon.
Uyise wakhe wafa kungekudala emva kokuba uMarcus efike ePortland kwaye intsapho yakhonza i-kinsin 'yenkampani yokugqoka ukuze iphile. UMarcus wayengumfundi obalaseleyo, kwaye wayebonakaliswe kubugcisa nomculo kule minyaka, ukufunda ukudweba nokupenda, nokudlala i-mandolin kunye nepiyano. Njengoko wakhula, waba nomdla kwimibandela yokubambisa inkululeko kunye nezopolitiko ezisekhohlo.
NgoSeptemba 1921 waya kwiYunivesithi yaseYale, apho wahlala khona iminyaka emibini. Wafunda ubugcisa be-liberal kunye nesayensi, wabhala ipapasho yosuku lwe-liberal, kwaye wayesekela ngemisebenzi engaqondakaliyo ngaphambi kokuba ashiye uYale ngo-1923 ngaphandle kokugqwesa ukuzinikela ebomini njengomculi. Wahlala kwiSixeko saseNew York ngo-1925 waza wabhalisa kwi-Arts Students League apho wafundiswa ngumculi, uMax Webe r, kunye neParsons School Design apho wafunda khona phantsi kwe-Arshile Gorky. Wabuyela ePortland ngezihlandlo ukutyelela intsapho yakhe kwaye wajoyina inkampani ebambileyo ngelixa elinye ixesha. Uthando lwakhe lwezemidlalo kunye ne drama lwaqhubeka ludlala indima ebalulekileyo ebomini bakhe kunye nobugcisa. Wenza ipeyinti yecala, kwaye wathi malunga nokudweba kwakhe, "Ndicinga ngemifanekiso yam njengedrama; imilo kwimifanekiso yam i-performers."
Ukususela ngo-1929-1952 uRothko wafundisa ubugcisa bezingane kwi-Centre Academy, eBrooklyn Jewish Centre. Wayekuthanda ukufundisa abantwana, evakalelwa kukuba iimpendulo zabo ezingabonakaliyo zobugcisa bazo zamnceda ukuba athabathe intsingiselo yemvakalelo kunye nesimo somsebenzi wakhe.
Umboniso wakhe wokuqala wabantu waba ngowama-1933 kwi-Contemporary Arts Gallery eNew York. Ngelo xesha, imizobo yakhe yayingumhlaba, ama-portraits kunye nama-nudes.
Ngomnyaka we-1935 uRothko wajoyina nabanye abaculi abasibhozo, kuquka uAdolph Gottlieb, ukudala iqela elibizwa ngokuba yi -Ten (nangona kwakukho kuphela abayisithoba), ngubani oye wathonyelwa yi- Impressism , eyenziwe ngokubhikisha kwezobugcisa obubonakaliswa ngelo xesha. Abalishumi baziwa kakhulu ngokuba nomboniso wabo, "I-Ten: Abaphikisi be-Whitney," evulekileyo kwi-Mercury Galleries iintsuku ezintathu emva kokuvulwa kweNyaka ka-Whitney. Injongo yoqhankqalazo lwaye kwachazwa kwintetho ekhathalogu, eyachaza ukuba "abahloli" kunye "ngokuzimeleyo" kwaye ichaza ukuba injongo yobudlelwane babo yayiza kubhekisela ingqalelo kumbono waseMelika owawungekho ngokoqobo, engabonakaliyo kunye nokugxininisa nombala wasekuhlaleni, kwaye "kungekudala" kwimeko engqongileyo. Injongo yabo yayiku "kubhikisha ngokuchasene nokulinganiswa kwepeyinti yaseMelika kunye nokudweba ngokoqobo."
Ngo-1945 uRothko watshata okwesibini. Ngomfazi wakhe wesibini, uMary Alice Beistle, wayenabantwana ababini, uKathy Lynn ngo-1950, noChristopher ngo-1963.
Emva kweminyaka emininzi yokugqithisa njengomculi, kwiminyaka yama-1950 ekugqibeleni kwazisa uRothko kwaye ngo-1959 uRothko wayenomboniso oyindoda eyodwa eNew York kwiMyuziyam yoBugcisa boLimanje. Wayesebenza nakwiinkomfa ezintathu ezinkulu phakathi kwee-1958 ukuya ku-1969: izibhambano kwiziko laseHolyoke kwiYunivesithi yaseHarvard; Imidwebo enzulu yeZiko leMidlalo yokuTyela kunye neSeagrams Building, zombini eNew York; kunye nemizobo yeRothko Chapel.
URothko wazinikela eneminyaka engama-66 ngo-1970. Abanye bacinga ukuba imidwebo emnyama kunye neyebucayi eyayenza emva kwesikhundla sakhe, njengaleyo iRothko Chapel, ibonisa ukuzibulala kwakhe, kanti abanye bacinga ukuba loo misebenzi ivulela umoya kunye nesimemo sokwazi ngokomoya.
URothko wathunyelwa ngo-1964 nguJohn no-Dominique de Menial ukudala indawo ecamngcayo ezaliswe imifanekiso yakhe eyenziwe ngokukodwa kwindawo. I-Rothko Chapel, eyenzelwe ngokubambisana nabacebisi bakaFilipu Johnson, uHoward Barnstone kunye no-Eugene Aubry, ekugqibeleni wagqitywa ngowe-1971, nangona uRothko wafa ngo-1970 ke akazange abone isakhiwo sokugqibela. Isakhiwo sitena esingasetyenzisiweyo esitagonal esinezinto ezilishumi elinesine kwimidwebo ye-Rothko. Imizobo yiRotko isignesha ejikelezayo iirectangles, nangona ixutywe emnyama - iindawo ezisixhenxe ezixutywe ngamacangca amnyama aphezu komhlaba, kunye neengubo ezisixhenxe zepeyinti.
Yisonto lentlangano abantu abaye batyelela kulo lonke ihlabathi. Ngokutsho kwewebhusayithi yeRothko Chapel, "I-Rothko Chapel yindawo yokuhlala ngokomoya, iforamu yeenkokheli zehlabathi, indawo yokuzimela kunye nokuqokelela. abantu abangama-90,000 bazo zonke iinkolo abavakatye ngamnye ngonyaka ukusuka kuzo zonke iindawo zehlabathi. Yikhaya le-Óscar Romero Award. " I-Rothko Chapel iRejista kaZwelonke yeZakhiwo zeMbali.
Iimpembelelo kwi-Art of Rothko
Kwakukho uninzi lweempembelelo kwezobugcisa bukaRothko kwaye wacinga. Njengomfundi phakathi kowe-1920 ukuya ngasekupheleni kwee-1920 uRothko wathonywa nguMax Weber, uArshile Gorky, noMilton Avery, abavela kuye ukuba bafunde iindlela ezahlukileyo zokufikelela kwimifanekiso. U-Weber wamfundisa ngeCubism kunye nopopu olungabonakaliyo; UGorky wamfundisa malunga ne-Surrealism, i-imagination, kunye nemifanekiso engqungquthela; kunye noMilton Avery, owayengumhlobo onobuhlobo naye iminyaka emininzi, wamfundisa ngokusebenzisa imibala engqambileyo yombala obalaphaza ukudala ubudlelwane obunjani.
Njengabalingisi abaninzi, uRothko naye wayemthanda kakhulu imidwebo ye-Renaissance kunye nobuncwane bawo kunye nokukhanya kwangaphakathi ngaphakathi kuphunyezwe ngokusetyenziswa kwamacandelo amaninzi ombala obomvu wombala.
Njengomntu wokufunda, ezinye iimpembelelo zaziquka iGoya, Turner, Impressionists, Matisse, uCaspar Friedrich nabanye.
URothko wafunda noFriedrich Nietzsche , inkulungwane ye-19 yefilosofi yaseJamani, waza wafunda incwadi yakhe, Ukuzalwa Kweentlekele .
Wabandakanya kwimifanekiso yakhe yefilosofi kaNietzsche yomzabalazo phakathi kweDionysian neApollonian.
URothko uphinde wathonya nguMichelangelo, Rembrandt, Goya, Turner, Impressionists, uCaspar Friedrich, noMatisse, uManet, uCezanne, ukubiza ngambalwa.
Iiminyaka ze-1940 zaziyiminyaka elishumi ebalulekileyo eRothko, enye apho yahamba ngayo inguqu eninzi kwisitayela, ekhulayo kuyo kunye nepeyinti yembala yemifanekiso ebonakalayo ehambelana nayo. Ngokwendodana yakhe, uChristopher Rothko e- MARK ROTHKO, i-Decadeve Decade 1940-1950 , iRothko yayineendlela ezintlanu okanye ezithandathu ezahlukileyo kule minyaka elishumi, ngasinye sisithuba esingaphambili. Zizo: 1) Imifanekiso (c.1923-40); 2. I-Surrealist - Isiseko-esisekelwe kwisiganeko (1940-43); 3. I-Surrealist - Abstracted (1943-46); 4. Uhlobo olubanzi (1946-48); 5. Utshintsho (1948-49); 6. I-Classic / Colorfield (1949-70). "
Ngesinye isikhathi ngo-1940 uRothko wenza umzobo wakhe wokugqibela wesimboli, emva koko uvavanyo olwenziwe ngu-Surrealism, kwaye ekugqibeleni uyabhubhisa naluphi na ukusikisela kwendlela yokwenza izinto ezibonakalayo, ekugqibeleni aze awakhulume aze afikelele kwiimpawu ezingapheliyo ezijikelezayo kwimimandla yombala - ezininzi ngabanye - abaye baphenjelelwa kakhulu ngumzobo kaMilton Avery wepeyinti. Iifomfayile ziyizinto zokuqala zokuqala zenziwa nguRothko, ngelixa i-palette yabo ibonisa i-palette yombala wemibala ezayo. Ucacisa injongo yakhe ngokuthe xaxa, ekupheliseni imilo, kwaye uqala umzobo wakhe wemibala ngowe-1949, usebenzisa umbala ngakumbi ngokucacileyo ukudala ii-rectangles eziphambili kunye nokudibanisa uluhlu lweemvakalelo zabantu ngaphakathi kwazo.
Imibala yeMbala yoMbala
URothko uyaziwa ngokuba ngumbala wemibala yakhe, apho waqala ukudweba ngasekupheleni kwee-1940. Le mizobo yayiyimifanekiso emininzi kakhulu, malunga nokuzalisa udonga lonke ukusuka kwisantya ukuya kwisilo. Kule miboniso wayesebenzisa ubuchule bokusila , okokuqala kwakhiwa nguHelen Frankenthaler. Wayeza kubeka iipende zepeyinti elincinci kwi-tovas ukuze wenze ezimbini okanye ezintathu ezikhanyayo ezikhanyayo.
URothko uthe imidwebo yakhe yayinkulu ukwenzela ukuba umbukeli abe yinxalenye yamava kunokuba ahluke kwipayipi. Enyanisweni, wakhetha ukuba nemifanekiso yakhe eboniswe ndawonye kwimiboniso ukwenzela ukudala impembelelo enkulu yokuqulethwe okanye ukugqitywa ngemifanekiso, kunokuba iphulwe yiminye imisebenzi. Watsho ukuba imizobo yayingabonakali ukuba "yi-grandiose", kodwa eqinisweni, ukuba "isondelene nabantu." Ngokutsho kwegalari yePhillips eWashington, DC, "Iimpawu zakhe ezinkulu, eziqhelekileyo zendlela yakhe ekhulile, ukusetyenzisana ngokubambisana kunye nombukeli, ukunika abantu ithuba lokupenda kunye nokuqinisa imiphumo yombala. Ngenxa yoko, imizobo ivelisa kumbukeli ophendulayo ngengqondo yendawo ekhoyo kunye nesimo sokucinga ngokomoya. Ngombala wedwa-esetyenziswe kwiingxangxube ezinqambileyo ngaphakathi kwengqungquthela-Umsebenzi kaRothko uvuselela iimvakalelo ezinzulu ezivela kukungcebeleka kunye nexhala lokuphelelwa ithemba kunye nokuxhalabisa ngohlobo olusisigxina kunye nolungapheliyo lweefom zakhe. "
Ngo-1960 i-Phillips Gallery yakha igumbi ekhethekileyo ezinikezele ukubonisa umzobo kaMarko Rothko, obizwa ngokuba yiRokoko. Iqukethe ezine imizobo ngumculi, umzobo omnye kwindonga nganye yegumbi elincinci, unike isikhala umgangatho wokucamngca.
URothko wayeka ukunika imisebenzi yakhe yeziqhelo eziqhelekileyo ngasekupheleni kwee-1940, okhethiweyo ukuba azihlukanise ngombala okanye kwinani. Njengokuba wabhala ngobungcali ngexesha lokuphila kwakhe, njengencwadi yakhe, Umculi weNkcazelo: I-Philosophies kwi-Art, ebhaliwe malunga no-1940-41, waqala ukuyeka ukuchaza intsingiselo yomsebenzi wakhe kunye nombala wepeyinti yombala, esithi "Ukuthula lichanekile. "
Ingundoqo yoluhlobo phakathi kombukeli kunye nomzobo obalulekileyo, kungekhona amagama achaza oko. Imifanekiso kaMarko Rothko kufuneka ibe namava kumntu ukuba ayaneliseke ngokwenene.
> Kennicot Filipi, Amagumbi amabini, i-14 Rothkos kunye nomhlaba ohlukileyo , iWashington Post, ngoJanuwari 20, 2017
> Mark Rothko, iGoogle Gallery ye-Art, i-slideshow
> Mark Rothko (1903-1970), i-Biography, i-Phillips Collection
> UMarko Rothko: I-Real Artist , http://www.radford.edu/rbarris/art428/mark%20rothko.html
> Ukucamngca kunye nobuGcisa bemihla ngemihla badibana kwiRothko Chapel , iNPR.org, ngoMatshi 1, 2011
> O'Neil, Lorena, The Spiritual of Mark Rothko, Daily Dose, Dec. 23 2013http: //www.ozy.com/flashback/the-spirituality-of-mark-rothko/4463
> Ifa likaRothko , i-PBS NewsHour, ngo-Agasti 5, 1998
Ibali emva kwabesifazane ba-Monet kwiJadi
U-Edgar Degas: Ubomi bakhe kunye noMsebenzi
6 Izitayela ezithembekileyo kwizobugcisa zanamhlanje
Biography kaJackson Pollock
I-Biography yoMculi uJean-Michel Basquiat
Ubomi kunye nobugcisa bukaPaul Klee
I-Mercedes-Benz GLT Pickup Truck: Ukuza Kungekudala
Amacandelo okuKwakha ingxelo kunye nabaFundi
Iintlanzi, iRavens kunye noJays
Udwebo lwabaqalayo: Indlela yokuqalisa
Phezulu 'Ii-80 zeengoma zePolisa
Ukhuseleko Lumelana njani Umsebenzi?
Kutheni iHarvard yeSikolo soShishino kwaye Ndingayifumana njani?
Hlela kwaye ubonise iindawo ze-Boolean Field usebenzisa i-CheckBox kwi-DBGrid yaseDelphi
Naruto Shippuden Uncut Sets 24 kunye ne-25 (iDVD)
I-Houston Rappers Kufuneka Uyazi
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'uMhlanganyeli' ('Ukuthatha inxaxheba')
Iirhafu zeRhwebo noTshintsho lweeRhwebo